यसरी तनावमुक्त जीवन जिउनुहोस् ! – GoodNews24 – Good News24
Home/अन्य/यसरी तनावमुक्त जीवन जिउनुहोस् ! – GoodNews24
एजेन्सी। तनाव बिनाको जीवन सायदै कमै मात्र व्यतिको हुन्छ । मनोवैज्ञानिक तनाव हाम्रो जीवनको एक हिस्सा नै बनिसकेको छ । तनावपूर्ण जीवनको कारण हाम्रो कार्य क्षमता र स्वास्थ्यमा समेत बाधा आउँछ र एउटा खुशियाली जिन्दगी जिउनमा समस्या हुन्छ । धेरै तनाब लिनाले विभिन्न मानसिक रोगको शिकार हुनुका साथै समाजबाटै एक्लो पनि बनाउँछ ।
तनावलाइ कुनै पनि शारीरिक, रासायनिक वा भावनात्मक चोटको कारकको रूपमा बुझ्न सकिन्छ जुन शारीरिक र मानसिक असुविधाको कारण बन्दछ र रोगको रुपमा विकसित हुन पनि सक्दछ । हल्का मात्रामा दबाब र तनाव कहिलेकाहीं लाभदायक हुन्छ । उदाहरण को लागी, एक प्रोजेक्ट वा योजना पूरा गर्दा हल्का तनाव महसुस गरेर गर्दा , हामी प्राय: आफ्नो कार्य राम्ररी र उत्साहित भई कार्य गर्न सक्षम हुन्छौं । त्यहाँ दुई प्रकारका तनाव हुन्छन्: युस्ट्रेस (“सकारात्मक तनाव”) र त्रास (नकारात्मक तनाव), जसको सामान्य अर्थ चुनौती र अधिक भार हुन्छ। जब तनाव अधिक हुन्छ वा अनियंत्रित हुन्छ यसले नकारात्मक प्रभाव देखाउँदछ ।
तनावमुक्त जीवन कसरी जिउने भनर केहि बुँदाहरू दिएका छाै ।
– दिनचर्या (तालिका) फलो गर्नुहोस् ।
आफुले गर्नै पर्ने दैनिक कार्यतालिका बनाउनुहोस । दैनिक कार्यतालिकाले संरचित र व्यवस्थित जीवन शैली जिउन मद्दत गर्दछ । जब हाम्रो दैनिक कार्य तालिका राम्रोसँग संरचित हुन्छ, हामी हाम्रो दिनलाई अझ राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। तपाईं आफ्नो सबै कामहरू समयमै पूरा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र अझै केही मनोरन्जन गतिविधि, रुचि र खेलहरू समेत तालिकामा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ र यसो गर्नाले तनावमुक्त महसुस गर्नुहुनेछ ।
-चाँडै उठ्नुहोस् ।
बिहान सबेरै उठ्नुहोस् । एउटा भनाइ छ, “छिटो सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्नुले मानिसलाई स्वस्थ र धनी बनाउँदछ”। दैनिक दिनचर्या अनुसरण गर्नुहोस् र राती सुत्नको लागि सहि समय सेट गर्नुहोस् र विहान अबेर सम्म नसुत्नुहोस । चाँडै उठ्नु तपाईको शरीरको लागि मात्र होइन मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न पनि फाइदाजनक छ ।
– प्रशस्त आराम गर्नुहोस्
कहिले काही थकानको कारण पनि तनाव बढ्छ । आफ्नो दिमाग र शरीरलाइ प्रशस्त आरामको लागि समय दिनुहोस । जब तनाव हुन्छ , आँखा बन्द गर्नुहोस र गहिरो सास लिनुहोस् । काममा लगातार लागिरहनु तनावपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले ब्रेक लिनुहोस् र केहि मनोरन्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनुहोस । यस तरिकाले तपाईं शान्त रहनुहुनेछ र आफैंले रिल्याक्सको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
– खुशी दिने चिजहरुको सूची बनाउनुहोस् ।
तपाईंलाई खुशी पार्ने र आशावादी बनाउने चीजहरूको सूची बनाउनुहोस्। यो प्रविधीले तपाईको तनावलाई सकारात्मक तरीकाले कम गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, कार्यको सूची बनाउनुहोस् जुन तपाइँले गर्न आवश्यक छ वा एक दिनमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो सुझाव आफुलाई तनाव हुने अवसरबाट बन्चित गराउन सक्ने केहि गतिविधिहरुको सूची बनाउनु हो . जहाँ तपाईं सबै तनाव चिन्ताबाट मुक्त भएर रिल्याक्स महशुस गर्न सक्नुहुन्छ । यो ध्यान केन्द्रित गर्ने र संगठित रहने र अनावश्यक चिन्ताहरूको बारेमा धेरै सोचविचार नगरी सबै कार्यहरू पूरा गर्ने राम्रो तरिका हो।
– चुनौति स्वीकार्नुहोस् र सामना गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं आफैंलाई कठिन अवस्थामा पाउनुहुन्छ वा यदि तपाईंको केही निर्णयले तपाईंलाई समस्यामा पार्दछ भने, यसलाई स्वीकार्नुहोस् र बरु यसको लागि समाधान खोज्नुहोस्। जब तपाईं आफ्ना चुनौतीहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंको दिमाग र चेतनामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले तपाईंलाई भविष्यमा कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्न समेत बलियो बनाउँदछ।
– आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्
आफ्नो राम्रो ख्याल राख्न कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। जब हामी तनावग्रस्त अवस्थामा हुन्छौं, हामी आफैंमा चिन्ता नगरी यसलाई एउटा साधारण प्राकृतिक प्रतिक्रियाको रुपमा लिनु पर्दछ । या त हामी स्वस्थ खाना खाएर वा हाम्रो शरीर र दिमागलाई पर्याप्त विश्राम दिएर चिन्ता हटाउने प्रयत्न गर्न सक्छौ । अत्याधिक चिन्ता बढेको अवस्थामा खानपिनमा समेत ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । यो अज्ञानताले हामीलाई अधिक हानि पुर्‍याउँछ र तनावको सामना गर्ने हाम्रो शक्तिलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
– उपकरणहरूबाट बच्नुहोस्
जीवनशैली आरामदायी र तनावमुक्त बनाउन तपाइलाइ नकारात्मकतामा अलमल्याउने सबै कुरा हटाउनुहोस्। यी अलमल्याउने उपकरणहरू मोबाइल फोन, ल्यापटप र टेलिभिजन जस्ता चिजहरु हुन्छन्। सकारात्मक कल्पना गर्नुहोस किनकि अध्यात्मिक उपस्थिति भौतिक उपस्थिति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जीवनबाट पूर्ण रूपमा यी अलमल्याउने सामाग्रीहरु हटाउन त गाह्रो हुन्छ तर हामी कुनै विशेष कार्यमा फोकस गरिरहेको अवस्थामा यीनीहरूको प्रयोग कम गर्न सक्दछौं।
-ढिलाइ नगर्नुहोस् ।
भोलि कहिले आउँदैन। अर्को दिनको लागि भनेर काम बाँकी नराख्नुहोस । सकेसम्म चाँडो काम पूरा गर्नुहोस्। काम भोलि सम्पन्न गर्ने सोच, राख्नाले कहिले पनि काम सम्पन्न हुँदैन जसले असफलता निमत्याउँछ र त्यहि असफलता तनावको कारण बन्छ । सँधै खुशी हुनुहोस् ! खुसी रहनुको मतलब शरीरलाई पनि फीट र फुर्तिलो बनाउनु हो र यो तपाईं व्यायाम गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नियमित व्यायाम शरीरको लागि ठूलो बूस्टर हो किनकि यसले स्ट्रेस हर्मोन जस्तै कोर्टिसोल, र न्यूरोट्रान्समिटरको उत्पादन घटाउन मद्दत गर्दछ जुन तनाव प्रतिक्रियाको बेलामा सक्रिय हुन्छ।
– अँगालो हाल्नुहोस ।
तपाईलाई विश्वास लाग्ने , तपाइलाइ सहानुभूति दिने कुनै नजिकको व्यक्तिलाई हग गर्नाले दिमागले अक्सीटोसिन हर्मोन रिलीज गर्दछ र यस हर्मोनले तनाव कम गराउँछ । अर्कोतर्फ, चुम्बनले मस्तिष्कलाई एन्डोरफिन हर्मोन प्रसार गर्न मद्दत गर्दछ । “चुम्बनले भावनात्मक सम्बन्धको सिर्जना गरेर तनावलाई कम गर्दछ, जसले एन्डोरफिनहरू शरीरमा प्रसार गर्दछ र यस रसायन जसले तनाव र उदासीनता विरूद्ध लड्छ।”
तनाव कम गर्ने अर्को सरल प्रविधि छ जुन तपाईं कहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै बेला तपाईं निराश महसुस गर्नुहुन्छ। आफैलाई सहज बनाउनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, र तपाईंको मन पर्ने स्थानको बारे सोच्नुहोस् । मन पर्ने व्यक्ति या आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि चिजको कल्पना गर्नुहोस। त्यस्तै दिमागलाई व्यस्त राख्न सुन्दर भविष्यको लक्ष्य पूरा गर्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।